အဆင်ပြေဆုံး lacrosse သံခမောက်ကဘာလဲ။ - သံခမောက်
အဓိက > သံခမောက် > အအေးဆုံးဟော်သံခမောက်လုံး - အဆုံးစွန်လမ်းညွှန်
အအေးဆုံးဟော်သံခမောက်လုံး - အဆုံးစွန်လမ်းညွှန်
အဆင်ပြေဆုံး lacrosse သံခမောက်ကဘာလဲ။
ကက်စကိတ် S - အလုံခြုံဆုံးLacrosse သံခမောက်လုံးနှင့်အကောင်းဆုံးLacrosse သံခမောက်လုံးပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းများသည်။
STX ပြိုင်ဘက် - အသင့်တော်ဆုံးLacrosse သံခမောက်လုံး။
Warrior မီးလောင်ရာ -အများစုမှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုLacrosse သံခမောက်လုံး။
ကက်စကိတ် CPX-R - အကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက် / တန်ဖိုးLacrosse သံခမောက်လုံး။
၂၅ ။ 2021 ။
အဖွဲ့တိုင်းနီးပါးရှိ NFL ကစားသမားများသည် 3D ပုံသဏ္usingာန် သုံး၍ ပြုလုပ်ထားသောသံခမောက်အမျိုးအစားအသစ်ကိုစမ်းသပ်နေကြသည်။ ဒီမှာအရာအားလုံး shell ကိုအောက်မှာဘာန်းကျင်လှည့်။ ၎င်းကို Riddell SpeedFlex Precision Diamond ဟုခေါ်သည်။
ဒါဟာအားကစားသမားများအတွက်အဆင့်မြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကြောင်းပါ။ သက်ရောက်မှုအပေါ်သို့စွမ်းအင်ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စုပ်ယူနိုင်ဖြစ်ခြင်း။ ဆီလီကွန်ဗယ်လီအခြေစိုက်ကာဗွန်ပုံနှိပ်စက်များသည်ကစားသူတစ် ဦး စီ၏ ဦး ထုပ်အတွင်းသူတို့၏ ဦး ခေါင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်တွင်ကိုက်ညီသောအော်ပရေတာဘောင်များပါရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ချင်းစီယူပြီးကျွန်တော်တို့ Riddell သို့လွှဲပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးသံခမောက်ကိုဆောက်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားသူများနဲ့ခေါင်းများနဲ့ထိခွင့်ရလိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးကအားကစားများတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးပေါ်ပေါက်ခဲ့သောပျော့ပျောင်းသောသားရေ ဦး ထုပ်များကဲ့သို့ရေမြှုပ်သည်အတိတ်၏အဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အမြှုပ်များဖြစ်လျှင်သင်သည်မတူညီသောအမြှုပ်များရှိရမယ်။ ပဟေ.ိ။ ၎င်းသည်လုပ်သားအင်အားနှင့်စွမ်းအင်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။
ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုနှင့်အတူဒေသတွင်းကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့် ဦး ခေါင်း၏ပုံသဏ္combinedာန်နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကာကွယ်မှုတိုးတက်စေရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ကစားသမား၏ ဦး ခေါင်းကို Riddell မှဖန်တီးထားသောအက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်စစ်ဆေးသည်။
ထိုအခါကာဗွန်သည်ထူးခြားသောဇယားကွက်ပါသောထုံးစံခုခုခုနစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်က grill ကိုညှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကစွမ်းအင်ကိုစုပ်ထုတ်ပြီးကွေး၊ ဒါကြောင့်ဒီစွမ်းအင်အားလုံးကိုစုပ်ယူပြီးစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူပြီးပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖန်တီးရန်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အခါ၎င်းသည်ကစားသမားလိုအပ်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိကစားသမားလိုအပ်သည့်သူ၏ ဦး ခေါင်း၏ပုံသဏ္onာန်အရ Peyton အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအခါ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Manning သည်ယခင်ကသူတို့အနေဖြင့်အလွန်အဆင်ပြေကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသူသည်၎င်းခေါင်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်နားလည်သောဤကဲ့သို့သောအားကစားသမားကိုတွေ့ရခြင်းမှာအလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။
NFL ကစားသမားများသည်မည်သည့်သံခမောက်ပုံစံကိုသူတို့ရွေးနိုင်သည်ကိုကာဗွန်ကဒီမော်ဒယ်လ်ကိုကြိုးစားလေ့လာလိုသူ ၅၀ ကျော်ကပြောကြားခဲ့သည်။ NFL အသင်းတစ်ခုတွင်အနည်းဆုံးကစားသမားတစ် ဦး သည်လေ့ကျင့်စဉ်နှင့်ရာသီ၏ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွင်းကစားစဉ် Riddell Speed ​​Flex Precision Diamond ခမောက်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ ကစားသမားဟောင်း ၄၉ ယောက်မှ Brent Jones သည်ဒီဇိုင်းကိုအလွန်နှစ်သက်သဖြင့်ယခုသူသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
tampons များကိုကာဗွန်၏ကြီးမားသောမြန်နှုန်းမြင့် L1 ပရင်တာများတွင်ပုံနှိပ်ထားသည်။ ကာဗွန်ကသူတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရာ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းထက်အဆ ၅၀ မှ ၁၀၀ ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည် elasticity and strength ပိုမိုသောပစ္စည်းများအသုံးပြုနိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Ford Mustangs နှင့် F-150s များ၏အတွင်းပိုင်းအတွက် Adidas ဖိနပ်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏ဖိနပ်များကိုလည်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သမိုင်းကြောင်းအရစျေးကွက်သို့ထုတ်ကုန်သစ်တစ်ခုတင်ပို့ရန်မှာတစ်နှစ်ခွဲမှနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စာသားပြီးသားကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများရာပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းကြပြီ။ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုအရေးတကြီးလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ခမောက်များသည်လာသည်။
ယခုရာသီတွင် NFL ကပြင်းထန်သောဒဏ်ရာ ၂၁၄ ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက ၂၈၁ ခုမှထိုအရေအတွက်သည်ကျဆင်းသွားသော်လည်း ဦး ခေါင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ရိုက်ခြင်း၏အန္တရာယ်များကသာစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ 2017 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်း၏ဂျာနယ်တစ် ဦး groundbreaking လေ့လာမှုစစ်တမ်းကောက်ယူသည့် NFL ကစားသမား 99 ရာခိုင်နှုန်း, Post- mortem နာတာရှည်စိတ်ထိခိုက် encephalopathy, သိသိသာသာဆုံးဖြတ်ချက်ချ, ဆုံးဖြတ်ချက်ချ, တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုဆိုးရွားသောလက္ခဏာများပြသကြောင်းပြသခဲ့သည်။
NFL ကစားသမား Aaron Hernandez သည်လူသတ်မှုဖြင့်စီရင်ခံရပြီးနောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သောအခါနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ သုတေသီများတွေ့ရှိချက်အရဟာနန်ဒက်ဇ်သည် ၂၇ နှစ်အရွယ်တွင်အသက် (၄၆) နှစ်အောက်လူတစ် ဦး တွင်တွေ့ရှိခဲ့သမျှတွင်အဆိုးရွားဆုံးသောရောဂါလက္ခဏာခံစားခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
DeSimone ကဒီနည်းပညာကသူ့ကုမ္ပဏီကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ အကောင်းဘက်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား ပြီးတော့သူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ဟာထိပ်တန်းအားကစားသမားလိုပဲအရေးကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနည်းပညာကိုလက်လှမ်းမီဖို့ကျယ်ပြန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုကြောင့်ပဲ။ ဦး ခေါင်းသက်ရောက်မှု၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချရန်မည်သည့်ခမောက်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုအကဲဖြတ်ရန် NFL သည်ဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Seattle start-up VICIS မှ Zero1 သံခမောက်အားပထမနေရာ ၂ ခုပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သက်ရောက်မှုကိုစုပ်ယူရန်နှင့်တွန့်လိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီနှစ် NFL ရဲ့သုတေသနမှာ Riddell သံခမောက်ရှိ 3D ပုံနှိပ်စက်များသည်အခြားမော်ဒယ်များထက်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိမရှိပြသပါလိမ့်မည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောသံခမောက်များ၏ဈေးနှုန်းကိုမူမသိရှိရသေးသော်လည်း Riddell က၎င်းတို့သည်ကစားသမားတစ် ဦး လုံး၏သက်တမ်းကိုကြာရှည်ခံစေရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် NFLand ကောလိပ်အသင်းများမှ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင် DeSimone ကတစ်နေ့တွင်အားကစားသမားအားလုံးဘေးကင်းစေရန်သုံးနိုင်သည်။
အခြားအားကစားများစွာဖြစ်သောရေခဲဟော်ကီ၊ ဟော်၊ နှင်းလျှောစီး၊ စစ်တပ်နှင့်ရဲနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ bespoke ထုတ်ကုန်များသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မထိုက်မတန်သောကာကွယ်မှုကိုမောင်းနှင်သည့်နောက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
Cascade R နှင့် S တို့၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
TheSအနည်းငယ်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောလေဝင်လေထွက်ရှိနိုင်သည်R ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှု၊ သေးငယ်သည်S, နှင့်ကအားလုံးပတ်ပတ်လည်ကြီးမြတ်သံခမောက်လုံးပါပဲ။ မလောက်ဘူး၏ရန်ခြားနားချက်ကSပြီးနောက်R အတွက်ငါ့ကိုတခုတခုအပေါ်မှာပိုမိုဖြုန်းချင်တယ်S။
အသံထွက်ရန်ခက်ခဲသောစကားလုံးအချို့ရှိသည်။ မိခင်မဟုတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ ဒီစကားလုံးတွေကိုအမေရိကန်တွေတောင်မှကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်ဘူး။
ဒီနေ့အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်လိုအများအားဖြင့်အထင်အမြင်လွဲမှားတဲ့စကားလုံး ၁၄ လုံးကိုကျော်သွားမှာပါ။ ငါအခြားနေ့က Netflix ကစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Ugly Delicious အပိုင်း ၂ ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ငါကစကားလုံးတစ်လုံးလုံးကိုမှားယွင်းတဲ့အသံထွက်တဲ့ဇာတိစကားပြောသူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ တောင်းပန်ပါတယ်? တကယ်တော့သူပြန်ပြောပြီးစာတန်းထိုးကိုဖွင့်ပြီးသူပြောခဲ့တာကိုသူပြောနေတာသေချာပေမယ့်မှားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုလဲ အမေရိကန်တွေကစကားလုံးတွေကိုသူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ဘယ်လိုပြောတာလဲ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခါတစ်ရံစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်စကားလုံးများကိုသင်ယူသည်၊ ၎င်းတို့မည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုကြားခြင်းမဟုတ်ပါ။
နှင့်အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ဘာသာစကားမဟုတ်ပါဘူး။ အက္ခရာများသည်အသံတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဒါကြောင့်စကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့နိုင်ပြီးအသံထွက်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ပြီးမှားနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်တတ်သူတစ် ဦး ဦး သည်တစ်ခါမှမကြားဖူးသောစကားလုံးများစွာကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်သည်။ စာဖတ်သူများသည်စကားလုံးကိုမှားယွင်းစွာအသံထွက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထိုစကားလုံးသည် Echelon မဟုတ်ဘဲ Echelon ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရာသီအကောင်းတစ် ဦး မှန်းဆဖြစ်ခဲ့သည်။
CH သည် K သို့မဟုတ် CH သို့မဟုတ် SH ဟူ၍ အသံထွက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် SH အသံမဟုတ်ဘဲ K အသံဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကစကားလုံးကနေမပြောနိုင်ပါ။
Echelon ။ Echelon ။ ငါနဲ့စမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
Echelon ။ စကားမစပ်၊ ဤသင်္ကေတများကဘာလဲဆိုတာကိုသင်တွေးမိလျှင်၊ သူတို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသံထွက်သင်္ကေတများဖြစ်သည်။ သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုအသံထွက်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေမတူကြဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်သူမအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သူမသည်အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စာအတွက်လေ့လာလိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူမအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော playlist တွင် link တစ်ခုထည့်ပါလိမ့်မည်။ ဘုရားရေ။ ငါ Youchelon လို့ပြောဖို့တစ်ယောက်ယောက်ရှာလို့ရမလား Yougo သွားကြည့်လိုက်တယ်။
ငါရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဒီစကားလုံးကိုတခြားနည်းနဲ့မှားယွင်းစွာပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါရှာတွေ့ဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး ဒါကြောင့်သူက '' Echelon '' ကို CH သံဖြင့်ပြောပြီး၊ စကားလုံးအသံထွက်ကိုတောင်မှခန့်မှန်းရခက်သည်။
ဒီတော့ဒီစကားလုံးဟာအဘိဓာန်ထဲမှာအသံထွက်တစ်လုံးတည်းသာရှိပြီး၊ Echelon ။ အကယ်၍ သင်သည် echelon ဟူသောစကားလုံးနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိလျှင်၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုမိုကြီးမားသောအုပ်စုအတွင်းရှိအုပ်စုတစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်ကိုဆိုလိုသည်။
ငါက Metropolitan Opera အကြောင်းဒါဝိဒ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ အထက်တန်းလွှာအော်ပရာရုံအနီးမှာနေရတာအရမ်းအေးတာပဲလို့ငါပြောခဲ့တယ်။ Netflix ပေါ်ရှိ Echelon မှားယွင်းစွာအသံထွက်ကိုကြားရသောအခါကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်မှားယွင်းစွာပြောသောစကားလုံးများကိုစဉ်းစားမိသည်။
ဒါကြောင့်ငါ Facebook မှာတင်ပြီးသူတို့သူငယ်ချင်းတွေသူတို့မှားယွင်းစွာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ၊ စာဖတ်ခြင်းကနေသူတို့သင်ယူခဲ့ရလို့ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတာတွေအကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က 'ပရမ်းပတာ' လို့ပြောတယ်။ သူကပရမ်းပတာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ CH စာလုံးက CH ဆူညံတယ်။
ဤရွေ့ကား CH အက္ခရာများ Echelon လိုပဲလည်းလှည်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာမိခင်ဘာသာစကားပြောသူများပြောသောစကားလုံးများစာရင်းကိုလေ့လာနေသည်။ ငါကငါကမှားယွင်းစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ငါ့မိတ်ဆွေများကငါက mispronounced ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
၆ တန်းအတန်းတွင်အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်စာဖတ်နေသောကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း Lowell မှသူက 'အချိန်ဇယား' ဟုပြောခဲ့သည်။ အိုကေ၊ သူသည် L နှင့် D ကိုရော။ သူသည် K အသံမြည်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ sk, sk ။
အချိန်ဇယား။ ဇယား။ ဒါကြောင့် SCH ဟာကျောင်းမှာလိုပဲ S + K အသံဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် espresso စက်ကိုတည်ဆောက်ပါ
သို့သော်၊ အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ၊ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်အခြားဗျည်းများနောက်မှလိုက်လျှင်၎င်းသည် drag ကဲ့သို့ SH အသံဖြစ်လိမ့်မည်။ Schlep အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုခုကိုရပ်ရန်သို့မဟုတ်သယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အစားအသောက်ဆိုင်ကိုလေးထပ်ပေါ်ဆွဲတင်ရပါတယ်။
သို့မဟုတ်ပါကရှည်လျားခက်ခဲသောခရီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မြေအောက်ရထားပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့တစ်နာရီတောင်ကြာတယ်။ ရထားကိုနှစ်ခါပြောင်းရတော့မယ်၊ ဒါကငါ့ကျောင်းသားတွေအကြိမ်ပေါင်းများစွာတောင်းသောစကားလုံးပါပဲ။
ဒီတော့ဒီစာလုံးကိုဘယ်လိုအသံထွက်ရမလဲဆိုတာရှင်းပြတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ ငါအဆုံး၌ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်သင်ဆောင်းပါးဖော်ပြချက်ထဲမှာ link ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဘိဓာန်ထဲကကောင်လေးတောင်မှမှားယွင်းစွာပြောသောစကားတစ်ခွန်းကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
ဒါဟာ acai ပါပဲ အခုငါနားလည်ပြီ။ အခြားဘာသာစကားများမှစကားလုံးများကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိလာလျှင်၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသော်လည်းဆက်လုပ်နိုင်သည်။
ဤသည်နောက်ဆုံး syllable တခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားနှင့်အတူရေးသားခဲ့သည်။ ဒါဟာ acai မဟုတ်ပါဘူး acai မဟုတ်ပါဘူး မင်းသိလား ၎င်းသည်သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင့်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
မကြာခဏဖျော်ရည်၌ထား၏။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်များကဤ acai အသံထွက်ကြောင်းကြားသိခဲ့ရသည်။ ဆိုလိုတာကဒီအသံထွက်ဟာအင်္ဂလိပ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရှိမယ်။
ဒါပေမယ့် acai ပါ၊ နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အရင်ကမှားယွင်းစွာပြောခဲ့တာပါ။ ကိုယ့်အချိန်ဇယားနှင့်အတူဝယျလျလိုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအက္ခရာအချို့ရောထွေးနေတာကိုး။
အဲဒါကိုဒီလိုရေးထားတယ်လို့ငါတို့ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါမဟုတ်ဘူး၊ မကောင်းဘူး။ ဒီစကားလုံးကိုမှားယွင်းစွာပြောတတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဥပမာကိုရှာရန်မလွယ်ကူပါ။
ဒါပေမယ့်သတိရပါ၊ ဒါကမဟုတ်ဘူး၊ ဒါမှားတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ၎င်းသည် syllables ၃ ခုသာရှိသည်။ ဒါဟာမကောင်းဘူး။
ဆိုးပါတယ် သင်ဤစကားလုံးကိုမသိလျှင်ကစားခြင်းဟုဆိုလိုသည်၊ ကျွန်တော့်ခွေးကလေးသစ်သည်နည်းနည်းဆိုးရွားသည့်အရာဖြစ်ပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်၏ဖိနပ်များကိုနောက်ထပ် syllable အမြဲတမ်းစားလေ့ရှိသည်။
အဆိုပါစကားလုံးသည် triathlon ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤစကားလုံးကိုမှားယွင်းစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိသည်။ Triath-uh-lon လို့ပြောပြီး TH ပြီးနောက်နောက်ထပ် syllable ထပ်ထည့်လိုက်တယ်။
Triath-uh-Triath-uh-lon ။ အကယ်၍ သင်ကအမေရိကန် ၁၀ ယောက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးသူတို့ထဲကထက်ဝက်လောက်ကဒါကိုအသံထွက်တယ်လို့ထင်ကြလိမ့်မယ်။ သင်လည်းအေတစ်ခုထပ်ထည့်လျှင်စာလုံးပေါင်းမှားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
သို့သော်၎င်းသည်စကားလုံးလေးလုံးမဟုတ်၊ သုံးလုံးဖြစ်သည်။ Tri-ath-lon ။ Triathlon ။
အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုသည်ရေကူး၊ ရေကူး၊ စက်ဘီးနှင့်ပြေးနေသည်။ ကောင်းပြီ၊ နောက်လာမည့်တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါဒသမတန်း, ပထဝီဝင်အတန်းအစား၌ရှိ၏, ငါပြောသောအရာကိုမမှတ်မိပေမယ့်ငါဒီစကားလုံးအသုံးပြုခဲ့သည်: facade ။
ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီလိုမပြောခဲ့ဘူး၊ ငါပြောလိုက်တယ်၊ အတားအဆီး။ ကက်စကိတ်။
ဆယ်စုနှစ်။ Facade သည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်အသံထွက်မဟုတ်ပါ။ မျက်နှာ
C သည် S အသံဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Kreis နှင့် Stadt ကဲ့သို့စကားလုံးများစွာဖြင့် S ဖြစ်သည်။ မျက်နှာ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့ကဒီစကားလုံး ၂ ခုကိုဘယ်လိုအသံထွက်ရမလဲမသိဘူး။ vague နဲ့ vogue ။ မရေနှင့် Vogue ။
Kirk ကမှုန်ဝါးနေလားမသေချာဘူး။ ပြီးတော့သူပြောနေတာကစိတ်လှုပ်ရှားနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့် AY နေ့ကလို AY လို့ပြောရအောင်။ မသေချာမရေရာတဲ့သွားဖို့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခု ကက်သရင်းကဖက်ရှင်လုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်သူမက Vogue ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်သေချာမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာတော့ U နဲ့ E ကဒီအသံထွက်ကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်။
မရေနှင့် Vogue ။ မရေရာသောအရာသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ ငါပရိဘောဂအချို့ကိုအတူတကွထားရန်ကြိုးစားနေသည်၊ သို့သော်ဤညွှန်ကြားချက်များသည်မရေမရာဖြစ်နေသည်။
အရာတစ်ခုခုသည်ဖက်ရှင်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်လူကြိုက်များသည်သို့မဟုတ်ဖက်ရှင်ကျသည်။ ဆံပင်တွေကိုပြန်လည်စတိုင်ကျပြီလို့မယုံဘူး စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့အဆုံးမှာ UE အကြောင်းပြောခြင်းဟာဘယ်လောက်မရေရာ၊ တန်းစီ
အဲဒါစာလုံးတွေများလွန်းနေတယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်အဒေါ်ကဒီစကားလုံးရဲ့အသံထွက်ကိုမကြားဘူး၊ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး၊ အကယ်၍ သင်ကမိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစာဖတ်နေစဉ်စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့အသံထွက်ကိုမသိတာကြောင့်သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်၊ မိခင်ဘာသာစကားပြောသူတွေမှာအတူတူပြproblemနာရှိတယ်လို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဤစကားလုံးမှာ Queue သည် Q အက္ခရာကိုကျယ်လောင်စွာအသံထွက်သကဲ့သို့
Queue တွင်ဤစကားလုံးနှင့်အတူတူပင်အသံထွက်ရှိသည်။ cue ။ Queue သည်မျဉ်းတစ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ ပြပွဲမှလက်မှတ်ရရန်တန်းစီရပ်ပါ။
Cue အချက်ပြတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကို C-U-E ကို။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ညနေပိုင်း၌သင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အိမ်သို့ရောက်သောအခါ။
ပြီးတော့သူတို့ကဟေးနေတုန်းပဲ၊ ဒါကမင်းကိုအိမ်ပြန်သွားတာပါ။ ငါ QUE နှင့်အတူနောက်ထပ်နှစ်ခုရှိသည်။ အစ်မဖြစ်သူကထိုစကားလုံးသည်ရှေးဟောင်းဟုအမြဲထင်မှတ်ခဲ့သည်။
သို့သော်ထိုသို့မဟုတ်ပါ, ရှေးဟောင်းပါပဲ။ တစ်ခါတုန်းကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က 'စူပါစတိုင်' ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတစ်ယောက်ယောက်ကကြားဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါမဟုတ်ဘူး၊ ဒီတော့ IQUE မှာအဆုံးသတ်တဲ့စကားလုံးတိုင်းကအဲဒီလိုအသံထွက်လား။ ရှေးဟောင်း, ဖက်ရှင်ဆိုင်, ဝေဖန်မှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ထူးခြားတဲ့? မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် application နှင့်communiquésများရှိသဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်ဤနည်းဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါ။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြား အချိန်မှစ၍ ပရိဘောဂများကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောရှားပါးအရည်အသွေးမြင့်အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီရှေးဟောင်းစားပွဲခုံကငါ့အဖွားပိုင်။
ဖက်ရှင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သည်သေးငယ်။ ဖက်ရှင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖက်ရှင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ဟိုတယ်အခန်းများစွာမရှိပါ။ အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီသည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အရသာကောင်းမွန်စွာအလှဆင်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်စကားလုံးယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းကသူကတစ်ချိန်က artisanal ဟုပြောသောစမတ်ကျသော၊ စိတ်ဖိစီးမှုလှည်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းစည်းမျဉ်းများစွာရှိသည်မဟုတ်။
ဒီစကားလုံးကဒုတိယ syllable မှာရှိတယ်။ လက်မှုပညာ။ “ handcrafted” ဆိုသည့်အရာသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအရာဖြစ်ပြီး၊
လက်မှုပေါင်မုန့်။ Artisanal ဒိန်ခဲ။ စက်ရုံတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်သောအရာနှင့်မတူသည့်သေးငယ်သည့်အသုတ်တွင်လက်လုပ်တစ်ခုခု
လက်မှုပညာ။ Next ကိုတက် cognac ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းအမ်မလီကပြောတာကပါတီပွဲတခုမှာအသံကျယ်ကျယ်နဲ့ပြောပြီးအခန်းကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။
ငါက Cogganack အသံထွက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ သူမစဉ်းစားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပါတယ်၊ အက္ခရာတွေကိုကြည့်ပါ ဦး ။ ကော့ညက်။
သို့သော်၎င်းသည် cognac၊ cognac၊ cognac သည်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုမှာနက်ရှိုင်းခြင်း၊ ဤစကားလုံးသည်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ထိုစကားလုံး၏အသံထွက်ဖြစ်သင့်သည်။ မိုးခေါင်ခြင်းနှင့် OU နှင့်အတူမိုးခေါင်ခြင်းဖြစ်သည် keg အသံထွက်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ kegs မှာရှိတဲ့ဘီယာကိုမူကြမ်းဘီယာလို့ခေါ်ကြပြီးလူအများစုကပုလင်းများသို့မဟုတ်ဘူးခွံများမှာဘီယာထက်သောက်သုံးရန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ OU နှင့်အတူမိုးခေါင်မှုအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမမိုးနှင့်အတူကြာမြင့်စွာသည်။
နောက်ပြီးနောက်စာလုံးတစ်လုံးကတော့မူကြမ်းလိုမျိုးအသံထွက်နေပေမယ့်မတူညီတဲ့စာလုံးပေါင်း၊ DRAFT ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့နောက်ဆုံးပုံစံမဟုတ်သေးဘူး။ ငါ့အလုပ်၏ပထမမူကြမ်းရေးခဲ့တယ် ဒီဇိုင်း။
မိုးခေါင်ခြင်း။ မူကြမ်း ထိုစကားလုံးကဘာလဲ? ဗိုလ်မှူးကြီး, R ကိုဘယ်မှာလဲ ဒီဟာကအင်္ဂလိပ်လိုတခုတည်းသောစကားလုံးပါ၊ ကျွန်တော်မှတ်မိနိုင်တဲ့ R အသံနဲ့ R အက္ခရာမရှိဘူး
ဒီစကားလုံးရဲ့စာလုံးတွေကအသံထွက်အသံထွက်ကိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းကသူက 'ဗိုလ်မှူးကြီး' ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသံထွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သင်တန်းမှာတင်ဆက်မှုမှာအဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။
ငါလူတွေအများကြီးအတူတူဇာတ်လမ်းရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးသည်စစ်တပ်တွင်ရာထူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး။
Worcestershire? Worcestershire ကျွန်ုပ်တို့ကြမ်းပြင်ရှိသည်။ အဲဒီစကားလုံးကအရမ်းထူးဆန်းတယ် ငါတကယ်ကပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါး၌ဤအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။
ကြည့်ရအောင် ဤသည်မှာကျွန်တော်တို့ဗြိတိသျှတို့၏ငြင်းခုံမှုကိုအမှန်တကယ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည့်အမှုအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီငံပြာရည်ကို Worcester အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
Shire သည်အမေရိကရှိကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံများနှင့်ဗြိတိသျှတို့နှင့်ညီမျှသောကြောင့်၎င်းငံပြာရည်သည်ဒေသမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Worcestershire သည် New Hampshire ပြည်နယ်အမည်နှင့်တူသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပထမဆုံး R ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ syllable ထဲကသရအက္ခရာဟာ push vowel လိုပဲ UH ပါ။
Wuh - wuh ။ ဒါဆိုရင်နှုတ်ခမ်းတွေကတင်းကျပ်တဲ့စက်ဝိုင်းကနေစပြီးအနည်းငယ်အနားယူတယ်။ Wuh - wuh ဒါကစိတ်ဖိစီးနေတဲ့အသံပါပဲ။ ထိုအခါငါတို့နှစ်ခု unstressed syllables ရှိသည်။
Stershire - stershire - stershire - ထို့ကြောင့်သင်သည်နိမ့်ကျ။ မြန်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ST ဗျည်းအက္ခရာတစ်ခု၊ Worcest-- st-- st ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အသံသည် S အသံအတွက်အတူတကွစုစည်းထားရမည်ဖြစ်ပြီးလျှာသည် T. Worcestershire အတွက်ပါးစပ်ထိပ်သို့ရောက်လိမ့်မည်။
ယခုဒုတိယ syllables နှစ်ခုတွင် schwa ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းအတွက်မေးရိုးမလိုအပ်ပါ။ အဆိုးဆုံး။ Tershire ။
UR အသံနှစ်ခုကြားရှိ SH အသံကိုထုတ်လွှင့်ရန်၊ လျှာသည်အနည်းငယ်ရှေ့သို့ရွေ့သွားသည်၊ သို့သော်လျှာ၏အစွန်အဖျားသည်မည်သည့်အရာနှင့်မျှမထိရ။ သင်၏သွားများအတူတကွရှိနေမည်။ အဆိုးဆုံး။ ဒါက syllables သုံးမျိုးပဲ။
da da da ။ အဆိုးဆုံး။ ပထမ R ကိုအသံထွက်မပြောပါနှင့်။ Schwa ကိုနောက်ဆုံးစာလုံးတွင်ထည့်ထားပါ။
အချို့လူများက Shire ဟုပြောချင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော် New Hampshire ပြည်နယ်ကဲ့သို့ပင် shire, shire ကဲ့သို့၎င်းသည်နောက်ဆုံးစာလုံးတွင် Schwa ဖြစ်သည်။ ဘယ်စကားလုံးတွေကိုမှားယွင်းစွာအသံထွက်ပြောတာဒါမှမဟုတ်ကြားဖူးပါသလဲ။ မှတ်ချက်များထဲမှာရေးပါ။ အိုကေ၊ အစောပိုင်းကမင်းက“ အချိန်ဇယား” ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ငါကဒီတစ်ပတ်မှာ Word of Week လို့ခေါ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ်ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာအဲဒီမှာတစ်ယောက်ယောက်ကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဘယ်လိုအသံထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုငါရေးခဲ့တယ်။ Non-native စပီကာများအတွက်ကောင်းသောစကားလုံးများအမျိုးမျိုး။ ငါဒီမှာဒီ playlist ကိုလင့်ထားသည်။
အနည်းငယ်ရှိပါသည်ယွန်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများဘောလုံးနှင့်ဘတ်စကတ်ဘောနှင့်မတူဘဲထောင်နှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများသည်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ယှဉ်ပြိုင်နေကြသည်။ယွန်းသာအနည်းငယ်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူရှိပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာဤကုမ္ပဏီများသည်အားသွင်းနိုင်သည်နောက်ထပ်ရှိပါတယ်ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်အရမ်းလုပ်သူကလူအနည်းငယ်ယွန်းဂီယာ။၁၂ ။ 2020 ။
(သိသိသာသာတေးဂီတတီးခတ်) (♫ပြီးတော့ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမခံစားရမှီအထိငါ့ကိုသာထိပါ) ဒီသီချင်းကို! - ဤသီချင်း - ကျွန်ုပ်၏ပါးပြင်ကိုကိုက်လိုက်သည်ကအဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ပီကေနှင့်အတူ VLOG မပါ ၀ င်ပါ။ ကျွန်ုပ်စကားပြောနိုင်အောင်စက္ကန့်အကြာသီချင်းဆိုပါ။ (ဂီတဆက်လက်) အိုကေ၊ ဒီနေ့ငါတို့ခရီးသွားနေကြပြီ။ ဒီဆောင်းပါးကဘောလုံးအကြောင်းပါ။
သင်သည်ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်ခဲ့သည် - ဘောလုံး! ငါဘောလုံးချစ်တယ် - သူကဘောလုံးကိုချစ်တယ်။ ကျနော်တို့အနည်းငယ်ရှင်းပြဖို့ရှိသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုငါတို့- Boston.- ဘော်စတွန်အထူးခရီးကိုသွားနေကြသည်။
ငါတို့ဘာသွားကြမလဲ။ - ငါတို့က Patriots နဲ့ Houston Texans ဂိမ်းကိုကြည့်ကြမယ်။ - ဟူစတန်တက္ကဆက်၊ သူတို့သည်ဘောလုံးအသင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်။
New England Patriots သည်အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်အကြိမ်အနည်းငယ်လှည့်စားခြင်းကြောင့်ဖမ်းမိခဲ့သော်လည်းတစ်ချိန်လုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ လျှင်အဖြစ်သူတို့ချန်ပီယံခဲ့ကြသည်။ ထိပ်ဆုံးရောက်ရင်လူတွေကမင်းကိုအမြဲတမ်းရိုက်နှက်ပြီးမင်းကိုအပြစ်တင်ကြတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ လင်ကွန်းကိုသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးပွဲ NFL ဂိမ်းနဲ့အတူအံ့အားသင့်ကြပါစို့။ အံ့သြစရာ! သူကဝမ်းနည်းနေတယ်၊ ​​ဖျားနေလို့မနေ့ကငါသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဘောလုံးအကြောင်းအနည်းငယ်ရှင်းပြချင်တယ်။
လင်ကွန်းအကြောင်း ဦး ဆုံးအနေနှင့်အလံဘောလုံးကစားခြင်းဖြစ်သည်။ လင်ကွန်းကိုဆုတ်ဖြဲခြင်းနှင့်ဆဌမရွေးချယ်မှုရသည့်အခါကျွန်ုပ်ဖမ်းမိနိုင်သည့်အချိန်သည်အလွန်ကြီးမားသည်။ ဒီနှစ်မှာလင်ကွန်းဘယ်နှစ်ယောက်ဂိမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသလဲ။ - သုည၊ ငါတို့ ၇-၀ ငါထင်သလဲ - ၇-၀! ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနိုင်ရယူရမည်ကလေး၊ မင်းဘယ်ဂိမ်းကစားချင်လဲ။ - ငါး - ငါး? ည ၄း၄၃ နာရီ - အနည်းဆုံးလူအနည်းငယ်အဲဒီမှာရှိနေမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ လူသိပ်မများဘူး။
အမ် ဓာတ်ဆီဆိုင်ကိုသွားပြီးအချိုရည်တစ်ခု၊ အားရစရာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုတစ်ခုခုကိုအရင်သွားကြစို့။ ဒါကောလား။ ဒါကငါ့အတွက်မကောင်းဘူး ။- မင်းအတွက်မကောင်းဘူးလား။ မင်းရဲ့အစားအစာအတွက်လား - ဟုတ်တယ်၊ မင်းပိုကောင်းတာပေါ့။ သင်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ? ဥပမာအော်ဂဲနစ်အစားအစာလား - ငါကိတ်မုန့်ဒါမှမဟုတ် Lollipop လိုတယ်။
အဲဒါကျန်းမာပါတယ် - အိုး, gotcha.- Gatorade? ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားကိုနှစ်သက်တယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ - ရေခဲမြစ်နှင်းခဲ - ледရေခဲပြင်? ရေခဲမြစ်ထဲကနေလား - ရေခဲမြစ်ရေခဲမြစ်မဟုတ်၊ အေးခဲနေသောကျွန်ုပ်သွားဖုံးသို့မဟုတ်အားရစရာတစ်ခုရနိုင်မလား။ - ဒါကမင်းရဲ့ဂိမ်းအတွက်ကောင်းမလား။ - ဟုတ်တယ်။
ငါရေချိုးခန်းကိုသွားရမယ်၊ မင်းကိုင်ထားလို့ရမလား - ရေ, Gatorade: အဘယ်သူမျှမ goodies ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာဒီပုံကိုကြည့်ရအောင်။ ကောင်းပါပြီ
Quarterback, လင်ကွန်း။ အဆိုပါ pickaxe ရှာပါ။ သူမကဟိုမှာ! (ကလေးများနှင့်မိဘများကအားပေးကြသည်) ခြောက်ရွေးပါ ငါကခြောက်လရယူပါ။ ငါကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတာလားမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ခြောက်ယောက်ရမယ်လို့ငါပြောတယ်၊ ပြီးတော့သူကငါ့ကိုရယ်တယ်။
အပိုင်းအစကြည့်လိုက်သလောက်သင်သတိမမူမိသည့်အရာတစ်ခုခုရှိသည်။ လင်ကွန်း၊ မင်းဘာကိုလွဲချော်ခဲ့တာလဲ - ကျွန်ုပ်၏အလံသည်လုံးဝဆုတ်ခွာသွားခြင်းကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖယ်ရှား။ ဂိမ်း၏အစတွင်ပြန်ထည့်မထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာသူတို့လက်တွေလုံးလုံးရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ လင်ကွန်းသည်လှည့်စားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ လင်ကွန်းသည်လှည့်စားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဘောလုံးတွင်သူသည် NFL အသင်းအချို့မှထွက်ခွာခဲ့ပြီးအနိုင်ရခဲ့သည်။
ကြည့်ပါ ဦး ။ သူ၌တရားမဝင်အလံများရှိပါသလား။ ဒိုင်လူကြီးကမင်းရဲ့အလံတွေပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး 'လို့ပြောတယ်။ - နောက်တစ်ခုမဟုတ်လား။ - သင်တန်းဆရာကိုကြည့်ပါ။ သူက 'လင်ကွန်း၊ မင်းဒီမှာအလံကောဘာလဲ' '' သူမချွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး '' ကောင်းပြီ၊ သူ့ကိုသိပ်စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊
သူလိမ်ခဲ့တယ် သူ၏အလံသည်မထွက်ရ။ (Epic music ပြဇာတ်) (ပရိသတ်များရွှင်လန်းစွာပါ) Sean Duras လုပ်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့မမျှော်လင့်ပါ၊ လေယာဉ်ပေါ်မှနောက်ဆုံးသောသူများဖြစ်သည်။ (လင်ကွန်းရယ်တယ်) ငါကနောက်ဆုံးဖြစ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
ငါတို့လမ်းကြောင်းသစ်ကိုစလိုက်မယ်၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးလူတိုင်းကနင့်ကိုအမြဲစောင့်နေလိမ့်မယ်။ ဒါကအေးဆေးငြိမ်သက်တယ်။ ပထမတန်းစားရတယ်၊ ရှေ့ထိုင်ခုံ ၂ ခုရတယ်။ ပြီးတော့မိနစ် ၂၀ စောင့်ရတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်နီယာပိုလိစ်ကိုရောက်သွားတယ်။ ဘော်စတွန်ကိုသွားရတော့မယ်။ ဒီဗီဒီယိုတွေကိုသင်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သူကလူတိုင်းကိုမလုပ်ချင်ခဲ့ သူ့ကိုအချိန်အများကြီးမပေးပါနဲ့ ငါသူ့ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ပေးခဲ့ရင်တောင်ဒီဆောင်းပါးမှာငါ့သားကလိမ်တဲ့သူလို့ခေါင်းစဉ်ပေးလိမ့်မယ်။
ငါရယ်စရာလို့ထင်လို့ပဲ။ - အင်း။ - သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား၊ ငါလိုသူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး မင်းမျိုးချစ်ကိုမကြိုက်ဘူး။ '' သူတို့ကိုသင်သွားလို့မရဘူး၊ အသင်းတွေကိုပြောင်းလို့မရဘူး '' ကောလိပ်ကော။ - College.- ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောလိပ်ဘောလုံးကိုကြိုက်တယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကောလိပ်ဘောလုံးအားလုံးအံ့သြစရာပဲ။
ပြင်လား - အဲဒါကောင်းတယ်။ - မင်းကိုပြဖို့၊ ငါတို့မိသားစုတစ်စုလုံးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လ၊ နှစ်လလောက်က BYU ကိုငါတို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြတာကိုပြကြပါစို့။ ပြီးတော့ BYU ဟာဘောလုံးကစားနေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ Sean ရဲ့ဇနီးဂျဲနီကိုတောင်ငါတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။
Sean သည်ဘောလုံးအကြောင်းဘာမှမသိသော်လည်းသူ၏ဇနီးတွင်ဘောလုံးကိုချစ်သောမိသားစုကြီးရှိသည်။ (အလယ်အလတ်အဆင့်တေးဂီတဖွင့်သည်) - အစိမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြည့်နေသည်၊ ထို့ကြောင့်သဘာဝကျကျပြုမူပါ။ (ဆူညံသံများ) (ရယ်သံများ) - Ew ရှေးရှေး၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် - ဒါကရုပ်ရှင်ပါ။ ငါတို့ဘာတွေကြည့်နေကြတာလဲ - အို၊ ဒါကနေရှေ့မှာရှေ့မှာပုန်းနေရတာပါ။ ပြီးတော့ Leslie ကသူကခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ဘေးမှာကြည့်နေတယ်။ ငါနေရောင်မှပုန်းနေတာပါ။ ဂိမ်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်မိသားစုဂိမ်းကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တစ်ယောက်တည်း - Dave! (တီးဝိုင်းကစားမတ်လ) Dave! - ဟေ့! Dude, ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ခြေထောက်ကြောင်း hit ပြီးနောက်လုပ်နေသလဲ - Brutal - ဒီဂိမ်းကိုမင်းတို့ဒီမှာပြောနေတယ်၊ ​​ပြီးတော့မင်းအဲဒီကိုသွားပြီးငါက 'အိုး၊ ဒါကသူပဲ' (နှလုံးခုန်) - ငါဒီဘက်မှာနေသင့်တယ်။ - ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိလား။ - ငါသန်းသန်းအပိုင်းအစသို့မချိုးဘူးသောကြောင့်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။
ငါအရမ်းနာတယ်၊ မင်းသိတယ်၊ ဒီလိုခြေဆစ်ဖြူကဲ့သို့သော။ ဒါပေမယ့်ငါကလူတဝိုက် hopped ။ (အလယ်အလတ်တန်းစားတေးဂီတဖွင့်ခြင်း) (ပရိတ်သတ်အားပေးမှု) - သင့်လက်ကိုသင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်တင်ခြင်း၊ နံပါတ် ၅၆ တိုက်ခိုက်ခြင်း။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုပ်တစ် ဦး နှောင်းပိုင်းတွင်ထိခိုက်မှုနှင့်အတူကာကွယ်ရေးအတွက်ပစ်မှတ်နှင့်အတူလျှော quarterback ၏ ဦး ခေါင်း၌ထိတွေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချရန်။ - Brett ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကဒီမှာပါ။
မင်းရဲ့ buddy ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် - သင့်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ - မျက်နှာ၌တစ် ဦး လက်ကိုပုပ် - ကဘာလဲ? “ သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒိုင်လူကြီးမသိဘူး။
မင်းအခုရှုပ်ထွေးနေပြီ - Footlocker ကိုပြန်သွားပါ။ - Footlocker သို့ပြန်သွားပါ၊ သငျသညျဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုချစ်ရန်ရှိသည်။ ၎င်းမှာ Mattix ဖြစ်သည်။ ဟိုင်း - သူ၌ YouTube ချန်နယ်တစ်ခုရှိပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယူကျု့ချန်နယ်အတွက်ရိုက်ကူးပေးခဲ့သည်။
မဟာလူသား! ဂိမ်းကိုကြည့်ရတာပျော်ရွှင်ပါ။ - အင်း၊ - မကြာခင်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်အိမ်ထောင်ဖက်။
ငါတို့လမ်းလျှောက်ထွက်သွားကြပြီ၊ အားကစားရုံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုငါပြချင်တယ်။ လမ်းဖွင့်သမျှရဲ့ဒီချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ဒီတော့သူတို့ကိုပြသဖို့အေးဆေးမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့ BYU Cougars ဆီကိုပြန်လာပါ။ - အရမ်းအေးတာပဲ။ ဒီအားကစားကွင်းကိုငါကြိုက်တယ်၊ တောင်ကုန်းတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်း။
ငါတို့ဘယ်သူရှာသလဲကြည့်စမ်း။ - ဟိုင်း! - ဒါဟာဂျဲနီနဲ့အက်ဒလီပါပဲ။ ကျနော်တို့ Adley ကိုနှိုးလိုက်တယ်၊ ငါအရမ်းရိုင်းစိုင်းတယ်။
အိုကေ၊ သင့်ကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါလိမ့်မယ် သငျသညျ Adley ပြန်အိပ်, သွားပါ။ - သင့်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ - မင်းကိုလည်းတွေ့တာကောင်းတယ်
မဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာ Sean Duras ပါ။ သူမ - သူသည်အထက်တန်းကျောင်းတွင်ဘောလုံးကစားခဲ့သော်လည်းပျော်စရာကောင်းသည့်ဘောလုံးပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ - အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ - မှန်တယ်? (ပျော်ရွှင်သောအီလက်ထရောနစ်တေးဂီတဖွင့်ခြင်း) ဤတွင်ပါ ၀ င်သောစပီကာများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကျယ်သောအသံဖြစ်သည်။ ဘောလုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကဘယ်သူလဲ။ - နံပါတ် ၂၁ ထုပ်ထားတဲ့ Curry Bailey Smith - အရမ်း ၀ မ်းသာနေတယ်။ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုမှအမြတ်အစွန်းအပိုင်းအစတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယနှင့်ကိုးခုမြောက်အပိုင်းအစများကိုရရှိသည်။ - .. မင်းအတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ - ဒါအရမ်းကျယ်လွန်းတယ် (ပျော်ရွှင်သောတေးသီချင်းများဆက်နေသည်) - ဘာကြောင့်ကင်မရာကိုရေပုလင်းထဲထည့်ထားရတာလဲ။ လင်ကွန်းကကျနော့်ကိုနောက်ပြောင်တာကကင်မရာကိုပြောတာပါ။ prank ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါတို့ရေဘူးနှစ်ခုဟာအမှိုက်ပုံးထဲရောက်နေပြီ။ လင်ကွန်းကငါရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ဟိုတယ်ပါ - ဟုတ်တယ်၊ - ငါတို့မှာ boardroom ရှိတယ်! - ခန်းမကိုလှမ်းကြည့်ခွင့်ရတယ်။ ဒါကဒီအထူးဝတ်စုံနဲ့တူတယ်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းနံပါတ် ၅၃၄ ရှိပြီးမြှားလည်းရှိသည် - ၎င်းသည်နိမိတ်လက္ခဏာအလဟ like ဖြစ်သွားသည် - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သာဖြစ်သည်။ ငါတို့က ၅၃၄ ။ ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ကိုရတယ်၊ ပြီးတော့အဲဒါပြောပါ၊ ဘာလဲ၊ - Orient Heights Suite - Orient ဆိုတာဘာလဲ။ - Bananas - သူတကယ်မသိဘူး၊ Orient ဆိုတာဘာလဲ? ဤနေရာများအားလုံးရန်။
ပြီးတော့သူကအရှေ့တိုင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိသေးဘူး။ ဘာလဲ။ အဲဒါဘာလဲ? အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ - အတိအကျ။ ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ငါသိတာကအာရှ၊ တရုတ်လို
သင် BYU ဘောလုံးကွင်းကိုအပြီးသတ်ပြီးပါပြီ။ B oston တွင်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဟိုတယ်ကိုငါတို့ရရှိခဲ့သည်။ ညသန်းခေါင်ကျော်၊ - အင်း၊ ငါသူတို့ကို BYU ဘောလုံးပြတယ်၊ ဘယ်မှာလဲ။ - The VLOG ။ သင်ကလိမ်လည်သူဖြစ်ကြောင်းသင်ပြခဲ့သည် - ဟုတ်တယ်။
ပြီးတော့ငါတို့က BYU ဘောလုံးပွဲကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာပြခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့မနက်ဖြန်ဂိမ်းသွား, ငါတို့မနက်ဖြန်ရယ်စရာတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကတစ်ခုခုတော့အေးဆေးနေမှာပေါ့ - Yup! (grunts) - ငါ့အပေါ်မှာမျောက်ငယ်လေးတစ်ကောင်ကိုင်တွယ်နိုင်တယ် - ကြည့်ရအောင်။ (လင်ကွန်းရယ်၏) - မင်းတွေ့လား သူပြီးသွားပြီ
သူအလွယ်တကူနာကျင်ရတယ်။ - သင်သည်ငါ့လက်ချောင်းရိုက်။ - စောင့်ပါ၊ ငါတို့အဆုံးသတ်ရမယ်၊ ဒါကပျင်းစရာကောင်းတယ်။ - ဟင့်အင်း၊ - ဒါအရမ်းကိုပျင်းဖို့ကောင်းတယ်
ကောင်းပြီကောင်လေးတွေ၊ ဒါကြောင့်မနက်ဖြန်ဟာကြီးမားတဲ့နေ့ပါ။ သငျသညျဘောလုံးနေ့ပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတို့အိပ်တော့မယ်
ဒီကောင်လေးအရမ်းပင်ပန်းနေတယ်။ - Ahhh!
အကယ်၍ ကသံခမောက်နှစ်စဉ်ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းမရှိသေးပါ၊ ၎င်းသည်အသက် ၃ နှစ်အောက်ဖြစ်သည်၊ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့သည်၎င်းကိုပြန်လည်အတည်ပြုနိုင်သည်သံခမောက်ထုတ်လုပ်သည့် နေ့မှစ၍ မည်သည့်အချိန်မဆို ၁၀ နှစ်အထိသံခမောက်။
ငါ၏အ MLL vlog ၏ဒုတိယအပတ်ကမှကြိုဆိုပါ၏။ ယခုအပတ်ရာသီဥတုဆိုးရွားသည်။ ဒီအပတ်စဉ် MLL vlog လုပ်ခြင်းကိုသင်ဘာကြောင့်နှစ်သက်ရတာလဲဟုပေါလုအားမေးပါ။ ဖြေ။ ။ နှစ်ခုရှိတယ်။
ပထမ ဦး စွာငါနယူးယောက်လီဇာများနှင့် Major League Lacrosse တို့ကိုလူတိုင်းသိစေချင်သည်။ ဒါဟာအရေးကြီးတယ်၊ ကျွန်တော့်အသင်းဖော်များပါ၊ နွေရာသီရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်လွင်ချက်အချို့ကိုသင်နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟော်အစိတ်အပိုင်းများနဲ့အတူသင့်အတွက်ဖြစ်သင့်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပထမအပတ်က Annapolis ရှိ Chesapeake Bay Hawks ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ဒီလိဂ်မှာဒီနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးကစားနည်းဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်၊ အမြဲတမ်းလေထဲမှာရှိနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေကနေရာတစ်နေရာကလာကြတာပဲ။ ကျနော်တို့အတူတကွသုံးပတ်သာလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပထမအပတ်၌သင်အနိုင်ရတိုင်းအချိန်တိုင်းကောင်းပါသည်။ ဟုတ်တယ်။
သူပြောတာက ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က #AskPaul မှကတိပေးခဲ့သည့် Rabil2ကိုငါပေးမည်ဟုမေ့နေကြောင်းယနေ့အများသောအားဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က vlog၊ ဒီနေရာမှာအနိုင်ရသူမှာ Boom၊ ခမ်းနားထည်ဝါသော Congrats George ။
ဒါအခုမင်းအတွက်ပါ ကန်ထရိုက်အင်ဒရူး, သူသည်တစ်နည်းနည်းနဲ့သင်တို့အဘို့အရလိမ့်မယ်။ မင်းတို့ဂျော့ခ်ျဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်သုံးခုရှိတယ်။
၎င်းသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်တစ်လုံးမှမရ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ယောက်၊ နံပါတ်သုံး - ဂျော့ခ်ျကသူ၏ဂျော်ဂျီယာတွင်သူသည်ဟော်ခတ်ကစားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ဂျော့ခ်ျသည် Rabil2ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါသင်၏သူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်အတူယခုနေနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ကစားပါ
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်များစာမျက်နှာသို့ဂျော့ခ်ျရောက်ခဲ့သည်၊ ၎င်းကိုငါမပေးရန်ကျွန်ုပ်မေ့နေသောကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်ပေးလိုကြောင်းကျွန်ုပ်သတိပြုမိလိမ့်မည်၊ သို့သော်အနိုင်ရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာရုပ်ရှင်အဆုံးသတ်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးဖတ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ် ဟော် ဦး ခေါင်း၏စကားပြော။
ငါ Rabil2ကိုငါသုံးတယ်၊ မင်းဘယ်လိုခေါင်းမျိုးကိုသုံးလဲ၊ ပလတ်စတစ်ခေါင်းတွေကိုသေတ္တာများလိုပုံသွင်းတဲ့အခါငါမှတ်မိသေးတယ်။ သူတို့ကကျယ်ပြန့်တယ်၊ ကြီးလည်းကြီးတယ်၊ ငါတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပုံသွင်းလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ သူတို့ကိုမီးဖိုထဲပစ်ချလိုက်ပြီးချက်ပြုတ်လိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းကိုဖုတ်ရမယ် တကယ်တော့။ ဟုတ်တယ်၊ ငါဒီ vlog အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
ငါဟော်ခေါင်းတစ်ချက်ဖုတ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးမယ်။ သွားပြန်ပြီ။ စားဖိုမှူး Boyarabil မစတင်မီ Rabil2High School Spec, ala အကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ငါထင်တယ်။
ကောင်းတဲ့ ဦး ခေါင်းပုံသဏ္.ာန် ပြီးတော့
ငါတို့အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့အရာ ဘယ် ဦး ခေါင်းပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲပိုကျယ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ငါဒီခေါင်းကိုကြည့်ချင်တယ်
Ahh, သောခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကလေးတွေ၊ မီးဖိုကိုမလင်းခင်၊ အိမ်မှာပလပ်စတစ်နဲ့အပူရှိသင့်ဆရာဝန်များနှင့် / သို့မဟုတ်မိဘများသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါစေ ဒါပဲလုပ်ပါ။
ဒီတော့အဆင့် ၁: မီးဖိုအပူကိုစောင့်နေစဉ် ၃၀၀ ကိုထားပါ၊ Brad၊ Rabil ရဲ့မီးဖိုချောင်ခဏလေးမရှိသေးဘူး။ ငါတို့ Edge Rabil 2Cue မိတ်ဆက်ပွဲကိုမစားတော့ဘူး။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ: ပုံသွင်းခံရဖို့အဆင်သင့် Unstrung ပလပ်စတစ်ခေါင်း။
ထိုအခါသင်သည်သေနတ်သမားများသို့မဟုတ်နိုင်လွန်များကိုလိုအပ်သည်။ အချို့သောလူများကရော်ဘာကြိုးများကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဒီဟာတွေအတွက်ဘာတွေလဲ ဦး ခေါင်းကမီးဖိုထဲကထွက်လာတဲ့အခါမင်းကကောင်းတယ်၊ ပူတယ်၊ မှိုနေတယ်၊ ​​ဒါကမှိုမဟုတ်ဘူး၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါ့အပြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပါဘဲသင်ပလပ်စတစ်ကိုချည်ထားဖို့လိုတယ်။ မင်းခေါင်းကိုထွင်းနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ချက်ပြုတ်လက်အိတ်တွေ၊ မီးဖိုလက်အိတ်တွေ၊ ငါတို့ဒီမှာလုပ်နေတာကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်နေတယ်။ ဤရွေ့ကားငါ့ထုံးစံကိုချိုးဖောက်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အိုကေ၊ ငါတို့ ၃၀၀ အထိရှိပြီ။ အဲဒီမှာအတွက်ပစ်။
ငါးမိနစ်။ သုံးမိနစ်။ * အရာ * အချိန်ကုန်ပြီ။
ငါတို့ခေါင်းကိုထုပ်တယ် ဒီမှော်ဖြစ်ပျက်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ကျနော်တို့နောက်ကျောမှာစတင်ပါ။
မင်းထိပ်ကနေစပြီးဒီမှာလမ်းဘေးနံရံတွေကိုဖြတ်မယ်။ နည်းနည်းလေးကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားမယ်။ အပိုင်း ၁ ရှိတယ်။
အပိုင်း ၂ သွားကြစို့။ ဒါကအနည်းငယ်ကွဲပြားတဲ့ပုံသဏ္That'sာန်ကိုဒီမှာရယူပါ။ ငါတို့ကြိုက်သလောက်ရှာကြည့်ပါ။
လာမယ့်ဒီနှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်။ ဒါကြောင့်လာရန်ရှိသည်။ ငါတို့လည်းနီးပြီ။
ယခုလွယ်ကူသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ သင်ဤထုတ်ကုန်ကိုယူပြီးသင်၏ရေခဲသေတ္တာထဲပစ်ထည့်ပါ။ ငါးမိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းခုနစ်မိနစ်။
အချိန်ကကုန်ပြီးပြီ၊ ခေါင်းသည်အေးစိမ့်နေသင့်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာပြီးပြီဖြစ်သည်။ နှင့်စန်း! မင်းသိတဲ့အတိုင်းမင်းအနားမှာရှိတဲ့တော်တော်လေးကောင်းသောပုံသဏ္haveာန်ရှိတယ်။ ၎င်းသည် Rabil2မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတွင် G ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်။
စမတ်။ မင်းဒီမှာနေပြီးဒုတိယ Rabil ၂ ကိုငါပေးလိုက်တာ။
ဒုတိယ - သင်မည်သည့်ခေါင်းကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုမှတ်ချက်ပေးပါ။ ငါသည်သင်တို့၏မှတ်ချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့်ဆုရှင်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။
ထို့နောက် Andrews ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ သို့မဟုတ်သူကသင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိလိမ့်မည်။
အသုံးပြု Lacrosse သံခမောက်လုံးဖြေ - သင့်သားကသီးခြားအဖွဲ့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်သံခမောက်ဒါကကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုပါအသုံးပြုတဲ့ဟော်သံခမောက်လုံးဝယ်ပါ။ လူငယ်များနှင့်လူကြီးများရှိပါသည်ခမောက်, ဒါကြောင့်သင်မှန်တဲ့လာပြီဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။အသုံးပြု LacrosseGoalie Gear: ဂိုးသမားများသည်အခြားကစားသမားများအနေဖြင့်မှန်ကန်သောဂီယာကိုရှာခြင်းထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်။16.06.2020
TO သို့ဟော်သံခမောက်သင့် ဦး ခေါင်း၌ snug fit သင့်ပါတယ်။ ၏ padding ကိုသံခမောက်ဖိအားပင်ခိုင်မြဲစွာပေးသင့်သည်။ ၎င်းသည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရှိသင့်သော်လည်းမသက်မသာဖြစ်စေသည့်အထိမဖြစ်သင့်ပါ။ သင်၏သေချာစေရန်သံခမောက်သင့်တော်သောကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေး။ သင့်ခေါင်းပေါ်ရှိရှေ့နှင့်နောက်ရွေ့လျားခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးပါ။
ဟော်တံခါးပေါက်တစ်ခုပါကြွယ်ဝသောလူတစ်ယောက်အားကစား။ ဒါဟာပုံမှန် 'Ole ကွင်းပြင်မှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတွေကစျေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘောလုံးဂီယာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်စျေးကြီးတဲ့ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့တွေလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။အားကစားအဖြူရောင်လေးတွေလို့မခေါ်ချင်တဲ့အဖြူရောင်လေးတွေရှိတယ်။
ဟော်အရမ်းကောင်းတယ်စျေးကြီးအားကစားကစားရန်နှင့် Long Island ကဲ့သို့ Lax အတွက်ပူနွေးသောဒေသများသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ အမှန်တရားကတော့အားကစားအထက်တန်းကျောင်းအများစုတွင်ကစားသည်။ စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ကျော်သည်။ ကလပ်အသင်းအများစုသည်ပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ကျစရိတ်မှအကုန်အကျခံရန်ကူညီမှုကိုပင် ပေး၍ လူတိုင်းကစားခွင့်ရှိသည်။
ဟော်နဲ့ဟော်ကီ pads တွေကအတူတူလား။
ဟော်ပခုံးကွမ်းယာဆိုင်တူသည်ဟော်ကီပခုံးကွမ်းယာဆိုင်(ဟော်ကီဗားရှင်းများကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးကစားသမားအသစ်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဘောလုံးထက် ပို၍ ပေါ့သည်ကွမ်းယာဆိုင်။ သူတို့ကသက်တောင့်သက်သာ ရှိ၍ ပခုံးကိုဖုံးအုပ်သင့်သည်။ လက်နှင့်တံတောင်ဆစ်ပုတီး- အတွက်လက်တွန်းအားပေးယွန်းအလားတူဖြစ်ပါတယ်ဟော်ကီတ ဦး တည်းကိုအဓိကခြားနားချက်နှင့်အတူ။
အမျိုးသားကောလိပ်အတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အချိန်ဂိမ်း၁၅ မိနစ်စီကို ၄ မိနစ်ခွဲပြီး ၆၀ မိနစ်ဖြစ်သည်။ မှာလည်စည်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အဆုံး၏ဂိမ်း, အသင်းများကိုရုတ်တရက် - အောင်ပွဲအချိန်ပိုရှိသည်။ ဂိုးရသည်အထိအသင်းများသည် ၄ ​​မိနစ်စီကြာသည်။
မည်သည့် ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးယွန်းသံခမောက်ကဘယ်လဲ။
Cascade CPX-R သံခမောက်လုံး၏တည်ဆောက်မှုသည်ကစားသမားအားကြီးသောလိုင်းများနှင့်မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်မြင်သာမှုရှိစေရန်မေးစေ့စနစ်၊
သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုအကာအကွယ်ပေးဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအရာဖြစ်သည်။ သံခမောက်၏အပြင်ဘက်တွင်လည်းအလားတူ ABS shell တစ်ခုရှိပြီးလေကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချရန်နှင့်သင့်ခေါင်းကိုအေးအောင်ပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ SPR fit စနစ်သည် Cascade CPX-R နှင့်တူညီပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင် lacrosse များအတွက်လည်ချောင်းကာကွယ်လိုအပ်ပါသလား?
ဤသို့ပြုရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဟော်သံခမောက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင်ကဂိုးသမားတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ကာကွယ်မှုကပိုအရေးကြီးတယ်။ သင်၏လည်ပင်းတွင်ဂေါက်သီးခွေ၌လည်ချောင်းကာကွယ်မှုထည့်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ယွန်းသံခမောက်၏အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်ရွှေစံနှုန်းမှာအားကစားသုံးပစ္စည်းများအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များဆိုင်ရာအမျိုးသားအော်ပရေတာကော်မတီဖြစ်သည်။